Mogadishu Journal » 2017 » August » 11
Mjournal :-Ururka Al-shabaab ayaa mar kale waxa ay maanta weerar ku qaadeen degaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool, halkaasi oo uu fariisin ku leeyahay Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur). Al-shabaab ayaa la sheegay in Ciidamo fara badan ay soo dhoobeen degaanka Abal,...
Mjournal :-Wasiirka arrimaha dibadda ee Dowladda Federaalka Soom aaliya Mudane Yuusuf Garaad Cumar oo lahadlayay warbaahinta Qaranka ayaa faah faahin ka bixiyay guulihii dhinaca diblomaasiyadda ay ka gaartay dowladda Soomaaliya. Dadaalka Dowladda Soomaaliya ay ugu jirto sidii loo...
Mjournal :-Weerar is qarxin ah ayaa ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, iyadoo uu ka dhacay banaanka Masaajid ku dhow xabsiga oo ay salaadii jimcaha ku dukanayeen saraakiil ka tirsan Ciidamada Asluubta. Nin xirnaa jaakadaha qarxa ayaa isku qarxiyay afaafka hore ee...
Qarax ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho
Mjournal :-Qarax uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa goor dhaw ka dhacay Agagaarka Xabsiga Dhexe ee Muqdisho. Qaraxa ayaa la sheegaya in uu ahaa Ismiidaamin, waxaana fuliyay qof walxaha Qarxa lagu soo xiray. Ilaa iyo hadda lama Ogga Khasaaraha ka dhashay Qaraxaasi....
Natiijada doorashada Kenya oo maanta la shaacinayo
Mjournal :-Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa lafilayaa in uu dhawaan ku dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee doorashadii ka dhacday dalkasi, ayadoo shacabka Kenya ay sugayaan natiijadaasi. Maalintii shalay ahayd ayaa Guddiga doorashadu waxey sugayeen ilaa iyo 170 form oo ka...
Madaxweyne Farmaajo oo amray howlgalkii lagu dilay Cali Jabal
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmajo) ayaa amray howlgal qorsheysan oo ay nala fuliyeen saaxiibada caalamka ee ShaashWeyn oo bannaanka gobolka Benaadir ah halkaas oo lagu dilay horjooge sare ee kooxda...